कोरियाले लुटेको सपना ! औद्योगिक दुर्घ’ टना ज्या’न गुमाउँदै नेपाली कामदार – Kantipur Press
कोरियाले लुटेको सपना ! औद्योगिक दुर्घ’ टना ज्या’न गुमाउँदै नेपाली कामदार
कोरियाली भाषामा उनी पोख्त थिएनन् । भाषा नजानेपछि काम झन् गाह्रो । एक महिना त्यही कम्पनीमा जसोतसो कटाए । दोस्रो महिना सकिनै लाग्दा ठूलो दुर्घ’टनामा परे ।‘मैले गएर मेसिन सुरु गर्नु पर्ने थियो । यसो भित्र हेरेको बन्दाकोपी रहेछ । त्यही तान्न खोज्दा मेसिन चलेछ । कसरी चल्यो अहिले पनि थाहा छैन । एक्कासी हात मेसिन भित्र तानियो । दिउँसो साढे ३ बजेको ब्रेकपछिको घटना थियो त्यो । हातपछि ज्यान नै तानियो,’ अर्जुनले त्यो अँध्यारो क्षण सम्झने प्रयास गरे, ‘भाग्य भन्ने हुँदो होला, र त म दाहिने हात र दुवै खुट्टा कर्‍याक कुरुक भएर भाँचिदा पनि ज्या’न र टाउकोमा केही भएनछ ।’
अर्जुनलाई मेसिनबाट निकाल्दासम्म पनि अब त बाहिर हिँड्न सक्छु भन्ने लागेको रहेछ। हात चलाउन सक्ने र ठीक भैहाल्ने उनलाई लागेको थियो रे । तर त्यस्तो भएन । ‘म बेहो’स् हुनु पर्ने । त्यत्रो पीडामा पनि होसको होसमै थिएँ । एउटा खुट्टाको पछिल्लो भाग अगाडि आएको देखेँ । एउटा खुट्टाको पिँडुलाको मासु कम्पनीको लुगासँगै घुँडा छेउमा पोको परेको थियो । एम्बुलेन्समा राख्नै लाग्दा बल लगाएर हात खुट्टा चलाउन खोजेँ के चल्थ्यो !’
झन्डै तीन वर्ष उनको उपचार चल्यो । उपचारकै क्रममा एउटा खुट्टा घुँडा मुनिबाट काट्नु पर्‍यो । कोरियाली कम्पनीको कार्यस्थलमा दुर्घ’टनाबाट दैनिक ७/८ जनाले ज्या’न गुमाउँछन् भने अंगभंग हुने कामदारको संख्या ठूलो छ ।
कोरियाली श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वेभसाइटमा उल्लेख भए अनुसार औद्योगिक दुर्घटनामा परी सयौंको संख्यामा विदेशी कामदारको मृ’त्यु भएको छ । सन् २०१३ मा ९१ हजार ८ सय २४ जना दु’र्घटनामा परेका थिए भने २०१९ मा १ लाख ९ हजार २ सय ४२ जना विभिन्न किसिमका औद्योगिक दुर्घट’नामा परेका थिए । यस्ता दुर्घ’टनाबाट ज्या’न गुमाउनेको संख्या सन् २०१३ मा १९ सय २९ जना थियो भने २०१९ मा २ हजार २० जनाले ज्या’न गुमाए ।
मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सन् २०१६ मा औद्योगिक दुर्घट’नाबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा कम १ हजार ७ सय ७७ जना छन् भने २०१७ मा कम दु’र्घटना भएका थिए। त्यस वर्ष ८९ हजार ८ सय ८४ जना दुर्घट’नामा परेका थिए ।
प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियू)को एक अध्ययनमा ७ प्रतिशत विदेशी मजदुर औद्योगिक दु’र्घटना परेको देखाइएको छ । तर धेरैजसो कम्पनीले दुर्घ’टना लुकाउने भएकोले यो संख्या अझ धेरै हुन सक्ने देखिन्छ । एमटियूले राखेको तथ्यांकमा सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म ३८ हजार ४ सय ४८ जना विदेशी कामदार औद्योगिक दु’र्घटनामा परेको उल्लेख छ । यस्तै ६ सय ७ जना कामदारले ज्या’न गुमाएका छन् ।
सन् २०१९ मा ७ हजार ६ सय १४ जना औद्योगिक दु’र्घटनामा परेको देखिन्छ भने १ सय ३८ जना कामदारले कार्यस्थलमा भएको दु’र्घटनाबाट ज्या’न गुमाएका छन् । त्यस्तै सन् २०२० मा औद्योगिक दुर्घ’टनामा परी मृ’त्यु हुने विदेशी मजदुरको संख्या १ सय १२ जना रहेको छ भने ७ हजार ६६६ जना घा’इते भएका छन् ।
गत अगस्टमा कोरियाली सांसद खाङ उन मीले संसदमा बोल्दै सन् २०२० को जनवरीदेखि २०२१ को जुनसम्म १ हजार १ सय १३ जनाको औद्योगिक दुर्घट’नामा ज्यान गएको जानकारी दिएकी थिइन् । त्यसमध्ये १ सय ३५ जना विदेशी रहेको बताएकी थिइन् ।
कोरियाली लगानीकर्ताको सोच अहिले पनि सन् १९७०/८० को जस्तै भएकाले कार्यस्थल सुरक्षित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले विदेशी कामदारको दुर्घट’ ना हुने सम्भावना कोरियाली कामदारको तुलनामा तीन गुणा बढी भएको पनि उनले बताएकी थिइन् । ‘विदेशी कामदारको माग भनेको गाह्रो, खतरना’क र खराब कामको लागि मात्रै कोरिया जान्छन् भन्ने छ । त्यस्ता कुराले हाम्रो देशको छवि राम्रो गर्दैन । त्यसैले हामीले सुरक्षित कार्यस्थल बनाउन तुरुन्तै काम गर्नु पर्ने छ ।’
विकसित देशमा कोरिया सबैभन्दा बढी औद्योगिक दु’र्घटना हुने देशमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले सन् २०१५ मा गरेको विकसित देशहरूको अनुसन्धानले कोरियामा प्रत्येक दस हजारमा ०.५३ जनाको दुर्घट’नाले ज्यान गएको देखाएको छ । विकसित देशको तुलनामा सोही समयमा बेलायतमा ०.०८ र स्विडेनमा ०.०७, नेदरल्यान्डमा ०.०५ जनाको मात्रै दु’र्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
कान्तिपुर मा गोकुल थोकर ले लेख्नुभएको समाचार हो
‘कोरियाको कमाइ पाँच वर्षसम्म हुण्डीबाटै पठाएँ ‘
दक्षिण कोरियाले क्वारेन्टाइनको अवधिलाई घटायो